Laurence Fishburne nemukadzi wake wemakore gumi nemashanu, Gina Torres, vakapatsanuka - Nhau
Kuru Blog Nhau Macelebs Style
Laurence Fishburne nemukadzi wake wemakore gumi nemashanu, Gina Torres, vapatsanuka
Mudzimai waLaurence Fishburne wemakore gumi nemashanu, Gina Torres, vapatsanuka, vakasimbisa musi waSeptember 20. Nhau idzi dzakauya mushure mekunge atorwa mifananidzo achitsvoda mumwe murume nguva pfupi yadarika, zvichitungamira vazhinji kushamisika kana vaviri ava vapatsanurana chinyararire uye chinyararire.
'Nemoyo unorema, ini naLaurence takaparadzana chinyararire ndokutanga kuparara kwemuchato wedu mukutanga kwegore rapfuura,' akaudza People magazine. 'Hakuna vakomana vakaipa pano. Nyaya yerudo chete ine magumo akasiyana neese anga akatarisirwa nemumwe wedu. '
chii chakaitika kuna candace cameron bure pane maonero
Akawedzera, 'Asi zvinofadza, zvakadaro, mhuri yedu inoramba yakasimba uye ticharamba tichirera mwanasikana wedu pamwe nerudo nemufaro uye kutya. Zvakare nekusimudzirana neruremekedzo nerudo uye nekuenderera mberi kwekunzwisisa kuti tiri mune izvi pamwe chete, kana zvisiri padivi nedivi. '
Laurence naGina vakapedzisira kuonana pamwechete pachena muna Zvita 2015. Kubva ipapo, ivo vakaita akawanda solo kuonekera kuma premieres uye zvimwe zviitiko.
Vakaroora vakaroora muna 2002.
Iyo Peji yeNew York Post Peji yakashuma musi waSeptember 20 kuti Gina, uyo achangobva kutamba nyeredzi mu 'Suti,' akaonekwa chikafu chemasikati kweawa kuSweet Butter cafe muLos Angeles nemurume akavanzika. Kunyange anga asina kupfeka ringi yemuchato, akaonekwa achitsvoda nerudo murume kumeso kwetafura.
Runyerekupe rwenyonganyonga rwakakomberedza 'Iyo Matrix' nyeredzi naGina kwegore rapfuura. Muhurukuro yaNdira 2016 naHero! , Gina akataura nezvake semukadzi wemutambi. Nekudaro, munaGunyana 2016, akaudza New York Times kuti akarega 'Masutu' mushure memakore matanhatu nekuti 'hupenyu hwangu chaihwo hwaida kurerutswa.'
Laurence naGina vanogovana mwanasikana ane makore makumi maviri nemaviri Delilah. Laurence ane vamwe vana vaviri kubva kuhukama hwekare, uye Gina anga ari amai vokurera kune avo vana.
alyssa logan uye tarek iyo moussa
Mumiriri wemusikana akaramba kutaura kune Peji Rechitanhatu, nepo repamuLaurence asina kupindura.
Justin Bieber masharubu uye zvakazara anotarisa kuwana yakavhenganiswa ongororo
Vin Diesel, makumi mashanu nemaviri, anogovera mifananidzo isina hembe pamhenderekedzo
vana mafirimu kubva kuma90s
blac chyna kudya uye kurovedza muviri
wendy williams mukadzi chaiye
scott grimes uye adrianne palicki
ndiani akaroora Janet jackson
ratings yekurarama na kelly uye michael